Enye yeempawu zelizwe lethu ukususela kumaxesha amandulo kuhlala i-birch. I-Birch sap yasinceda ukubuyisela amandla kumaqhawe ama-epic, i-birch yavuya kunye nabantu kwaye yadizelwa yintlungu. Iinqaba ze-Birch zihlala kwiindawo ezinkulu eRashiya kwaye zingaphantsi kwehlathi kuphela. Ukongeza, i-birch, kuquka i-birch buds, inezinyango zempilo kunye nokuphilisa. Oku kuya kuxoxwa kwinqaku elithi "Iipropati ezifanelekileyo kunye nokusetyenziswa kweengqumbo ze-birch kwiyeza."
Okwangoku, kukho iintlobo ezahlukeneyo ze-birches ezili-100 kwihlabathi. Ingaphezu kwesiqingatha sawo sikhula apha. Uhlobo oluqhelekileyo lwe-birch eRussia - ukulila (luthiwa libi kakhulu okanye libuhlungu). Lo mthi ungowomndeni wemithi ye-birch uze ufinyelele ubude beemitha ezingama-20. Kubizwa ngokuba yi-warty ngenxa yamaconsi ahlambulukileyo afaka amahlumela entwasahlobo. Ekuqaleni kwentwasahlobo, i-buds yokuqala ibonakala kwi-birch, kwaye ukusuka kuyo amaqabunga anamaqhosha anesimo somthunzi okanye isantathu. Iintyatyambo zezilwanyana ezinjengamacici ahlukeneyo ngokwesini. Amacici omntu ahlambulukileyo ekupheleni kweesebe, kunye namacici amabhinqa aphakathi kwelinye lamasebe ecaleni. Iintyatyambo zezilwanyana ziyintonga. Iifama ziyavusa ngo-Matshi, iintyatyambo ziyavela ngo-Aprili-Meyi, kunye neentonga ngo-Agasti-Septemba.
Ukutshala iinqabhoko kukhula kwihlathi kunye nasezindaweni zehlathi zaseRashiya kwingxenye yaseYurophu, kunye naseSiberia, i-Urals naseKazakhstan, ukudala amahlathi axubekileyo kunye ahlambulukileyo.
Izintsana ziqokelela entwasahlobo ekupheleni okanye phakathi kukaMatshi, xa ziqala ukuvuthwa, kwaye amaqabunga ayabonakali. Ngeli xesha baqulethe ukuxinwa kwezilwanyana. Amaqabunga ahlukiyo kumasebe, amasebe anqunyulwa kwaye amiswe ngomoya otsha, ehlanganiswe ngombhobho. Amasango omisiwe ahlambulukileyo kwi-birch buds, agcina iiinyo kwiipaki zephepha eziliqela eziliqela iminyaka emininzi.
Iibhokhwe ze-Birch ziqulethe:
ioli efunekayo, eneempawu zonyango,
i-saponins, eneempawu zetyholo,
i-phytoncides, elwa nama-advocate agents,
i-flavonoids, eyanciphisa ukutshabalalisa kwama-capillari,
ama-tannins, anesifo sokuguqula, isifo se-antibacterial ne-vasoconstrictive,
kunye ne-resin, ubuhlungu kunye ne-vitamin C.
Ngoko, iifayili ze-birch zine-antibacterial, anti-inflammatory, diuretic, choleretic, spasmolytic, expectorant, antitumor, sudorific, i-anthelmintic ne-haemostatic properties.
Amalungiselelo okwelapha eyenziwa ngesiseko se-birch buds amkelwe:
ezinezifo zezintso okanye i-urinary tract (ngaphandle kwexesha lokukhubazeka) njenge-diuretic and antibacterial agent;
nezifo ze gallbladder, i-bile ducts njenge-antispasmodic kunye ne-cholagogue;
kwizifo zesondlo sesisu njengomntu we-antispasmodic kunye ne-anti-inflammatory agent;
xa kukho i-edema yemvelaphi eyahlukileyo-i-diuretic;
kwizifo zendlela yokuphefumula njenge-diaphoretic, i-expectorant, i-antibacterial and anti-inflammatory agent;
Isicelo sangaphandle sokutshisa, amanxeba, izifo zesikhumba kunye nezilonda njengesilonda-ukuphilisa, i-anti-inflammatory and antibacterial agent;
kunye nesifo sofuba njengesifo esichasayo, esine-expectorant, i-hemostatic kunye ne-antibacterial agent;
xa izibilini ezinobungozi zivela kwinkqubo enzima njenge-antitumor agent;
xa i-bald isetyenziswe ngaphandle kwaye ikhuthaza ukukhula kunye nophuhliso lweenwele;
isetyenziswe ngaphandle ngaphandle kokunyanzelisa kwiindawo zamalungu kunye nokuvuvukala;
isetyenziswe ngaphandle nje ngeempawu ezinomzimba njenge-anti-inflammatory and hemostatic agent.
Amachiza asekelwe kwiimifuno ze-birch aphikisiwe kwizifo zesifo sentso, kunye nephepha lokucoca.
Ukusetyenziswa kwasekhaya kweentso: zokupheka.
Unokwenza ikhaya ukusuka ezintsheni zokusetyenziswa kwangaphakathi:
thabatha ezimbini iishuuni zezinto ezigqityiweyo eziqingqiweyo, ezizaliswe ngeglasi yamanzi abilayo, zibekwe kwindawo yokuhlambela amanzi ngamaminithi angama-15, zicolile imizuzu engama-45 kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo, i-infusion iyicatshulwa, ifakwe kwaye igcwale ngamanzi abilayo kwizinga langaphambili. Ukuxhamla kuthathwa kathathu ngemini yesithathu yeglasi.
Ungenza kwakhona i-decoction yokusetyenziswa kwangaphakathi:
uthathe iibheyipuni ezimbini zezinto eziqingqiweyo eziqingqiweyo, uthele iirazi yamanzi abandayo, uzisa kwi-thumba, ubilise ihafu yesure, epholile, ucwecwe, uze ufike phezulu kwizinga langaphambili ngamanzi abilisiwe. Umhluzi uthathwa kathathu ngosuku ngosuku lwesipuni.
Ukuhlaziywa kwe-birch bekude kube yindlela eyaziwayo yokuphilisa abantu.
Ukunyangwa kwamalungu ngamanyathelo abantu
Indlela yokukhusela impilo yabasetyhini?
Iingcali zemithi zokwelapha umdlavuza webele
Iindlela zabantu zokuphakamisa i-hemoglobin
Isaladi kunye neekrotithi zaseKorea
Izambatho zeengubo zezingane
Ukutya ngeentlanzi ezinamathanga
I-pie ekhethiweyo e-cherry ene-icing
Umvuzo "Olivier enhle"